आज फेरी घट्यो सुनको मूल्य ! तोलाको कति पुग्यो त ?
नेपाली बजारमा आज (आइतबार) सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । शुक्रबार ९२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार रु १०० ले घटेर तोलामा ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै, तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ६६० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै चाँदी तोलामा ९८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।